Balıkesir’de Trafik Nefes Alacak - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး10 BalikesirBalikesir ယာဉ်အသွားအလာရူအတွက် receiver
07 / 11 / 2018 Levent Elmastaş 10 Balikesir, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ယာဉ်အသွားအလာ Balikesir ကိုရှူရှိုက်
Balikesir ထောက်လှမ်းရေးKafaoğlu Cengiz Topel လမ်းဟာလမ်းဆုံအလုပ်အပေါ်တံတားကျော်ကြည့်ရှုအားပေး၏မြို့တော်ဝန်။ အဆိုပါလမ်းဆုံပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတKafaoğluအလုပ် Balikesir အတွက်နှစ်ခုခရိုင်စင်တာများချိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ Balikesir Kafaoğluအတွက်မြို့ပြယာဉ်ကြောများ၏အပန်းဖြေအဆိုပါလမ်းဆုံ 2019 နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီအသွားအလာမှဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသူကဆိုသည်။
က The ကန်ထရိုက်တာပျင်းလိပ်ခေါင်းအသက်အရွယ်ခဲ့ "သူတို့ခြေကိုဖန်ဆင်း: Kafaoğluနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးဖို့လာမယ့်နောက်ဆုံးပေါ်ထုပ်။ ငါအလုပ်ခရစ္စမတ်ဆုံသည်အထိလက်စသတ်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ Balikesir ၏နှစ်ခုစွန်းတိုင်အောင်အတူတကွဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ Altıeylül, Sefaköyနှင့်အတူ Square ကိုခရိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Paşaalanı, အလီ Hikmet Pasha ရပ်ကွက်အတွင်းပါတီအထူးသဖြင့်မြို့ဆေးရုံသည်ရုံးနှင့်အသစ်သောအဆိုပါစျေးဝယ်စင်တာBahçelievler, Pleven ဆီသို့ဦးတည်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်, Gazi Osman Pasa နှင့်ကြယ်ရပ်ကွက်ဧရိယာချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းဆုံသို့ဝငျစရာမလိုဘဲရှိယာဉ်မောင်းမြို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေး, ပြည်နယ်ရထားလမ်းမြေပေါ်, Cengiz Topel လေတိုက်ဖြတ်သန်းနှင့်တရားရုံးက Savastepe လမ်းဆက်အားဖြင့်ဒေသရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အလေးအနက်ထားအပန်းဖြေဖို့အတွင်းစိတ်-မြို့အသွားအလာ။ 20 တထောင်တမြို့ဆေးရုံသွားလူနေ့, ရုံးနှင့်ငါတို့သည်လည်းတထောင်ကလူကဒီဒေသကိုသွားပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစျေးဝယ်စင်တာနေ့စဉ် 40-50 ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ န်ဆောင်မှုများငါ Balikesir ၏လူအကျိုးရှိသောဖြစ်လိုပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများလုံလောက်သောသို့မဟုတ်မပိုကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုပြုလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်မြို့ပြယာဉ်ကြောakıllandırıpဒိုင်းနမစ်မှသက်သာရာရစေရန် Balikesir အတွက်လမ်းဆုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ 18 လငျးလမ်းဆုံလုပ်နေတာ။ အနီရောင်အလင်းအစိမ်းရောင်အလင်းမှာစောင့်ဆိုင်းနေစရာမလိုဘဲအကူးအပြောင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုပေးအပ်ပါလိမ့်မည်အလင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အသွားအလာအတွက်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာမြို့ဖြစ်သည်။ "
Balikesir အတွက်ယာဉ်အသွားအလာအတွက် standby အချိန် 30 ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရန် 17 / 12 / 2018 မြို့တော်ဝန် Balikesir ၏ထောက်လှမ်းရေးKafaoğluသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားစနစ်များဦးစီးဌာနအသိဉာဏ်နှင့်ပြောင်းလဲနေသောလမ်းဆုံထိန်းချုပ်မှုဗဟိုဌာန၏လုပျငနျးအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိသွားရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Kafaoğluအသွားအလာသိပ်သည်းသည်အဘယ်မှာရှိဒေသများရှိအသွားအလာ၏စီးဆင်းမှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ လာမယ့်ရက်ပေါင်းနှင့်များ၏လမ်းဆုံ၏ဒိုင်းနမစ်ဖွငျ့စမတ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Kafaoğluသစ်ကိုစနစ်၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူဘဝရောက်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်အများပြည်သူ Balikesir မှမိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Kafaoğlu "အားလုံးလမ်းဆုံဒီဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ထားရသည်။ ထို့အပြင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ခံရဖို့တစ်ဦးအနေအထားအတွက်ပြောင်းလဲနေသောအနေအထား, အခြား 20 အတွက်အလိုအလျောက်လမ်းဆုံ၏ 10 10 လမ်းဆုံ။ လုပ်ငန်းခွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများမှာလည်းပညာရေးမှတတ်၏။ အဆိုပါနှစ်သစ် ...
Balikesir, Manisa သမိုင်းဝင်မြေရထားကိုစေလွှတ်ခဲ့သည် 21 / 05 / 2019 Balıkesirဘူတာ Manisa ထံသို့စေလွှတ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ပြသအင်တုံဘုံဘိုင်အတွက်လွမ်းဆွတ်ရထားလမ်းမြေယာအဖြစ်ပြ။ xnumx'l တစ်နှစ်နှင့် Balikesir Gara အင်တုံ '' က Black ရထား '' TCDD မှာပြ 1960 နှစ်ပေါင်း ပတ်သက်. နည်းပညာနှင့်အတူရုန်းကန်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်ကားလမ်းအမှုဆောင်ခြင်း, သွန်သင် Manisa ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ, ခွင့် Manisa ရိုက်ယူခဲ့သည်ခဲ့သည်ဟူသောဝေါဟာရကိုထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ Balıkesirရဲ့သမိုင်းဝင်မြေယာရထားမရှိတော့ပါ! အဆိုပါ 20 နှစ်ပေါင်းBalıkesir-İzmir, (YHT မှလုပ်ကုန်တင်နှင့်လူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောနည်းပညာဒီဇယ်မီးရထားအစုံ (DMU) နဲ့အစားထိုးသည့်ရေနွေးငွေ့ခေါငျး (မြေယာရထား) ကမှတ်သားတဲ့ကာလများနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားများအကြားBalıkesirရဲ့Bandırma, Balıkesirနှင့်Kütahyaအညီ ) ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ...
ဒါဟာကို double-SATSO OSB လမ်းကြောင်းများသဖန်းပင်သို့ပြောင်းလဲ
Erkoçနိုင်ငံတော်သမ္မတ: "ကျနော်တို့ Kahramanmaras သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဥပမာထဲမှာလိမ့်မည်"
တူရကီရဲ့အသွားအလာကို cable ကိုကားတစ်စီးစနစ်ဖြင့်သင့်ရဲ့အသက်ရှုယူပါလိမ့်မယ်
receiver ရှူဖို့ Bursaray တူရကီနယူးတံတားလမ်း
အစ္စတန်ဘူလ်3တထောင်အသစ်ကဘတ်စ်ကားရူ receiver
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အသက်ရှု receiver ဓါတ်ရထားလိုင်းနှင့်အတူEminönü-Alibeyköy